Meghan Markle: မင်းသမီး၏ကံကြမ္မာကိုခန့်မှန်းထားသည် ... - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် Meghan Markle: Duchess ရဲ့ကံကြမ္မာကို ...
Meghan Markle: မင်းသမီး၏ကံကြမ္မာသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ...
Meghan Markle ခေတ်သစ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး လက်ထပ်ပြီးသား Sussex Duchess အဘယ်သူအားမျှလျော့နည်းငွေရေးကြေးရေးလွတ်လပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက် လှပသောဆံပင်အနက်ရောင်၏ကံကြမ္မာကိုယူရိုငွေသန်း 4,2 ထက်မနည်းရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်! သူ့ဘဝတွင်တောက်ပသောအစုံလိုက်ထည့်ရန်ဘာ ...
ထိုမှတပါး, မင်းသားဟယ်ရီ၏မယား အမှန်တကယ် Castafiore ပါတကား! Madame ရတနာကိုချစ်ပြီးသူတို့ကိုစုဆောင်း။ အမေရိကန်၌ 670 000 ယူရို၏စုစုပေါင်းကိုကိုယ်စားပြုသောနားထောင်း ၃၅ ခု၊ လက်ကောက် ၂၅ ခုနှင့်လက်စွပ်နှစ်ဆယ်ခြောက်မကရှိသည်။ ထိုမပါဝင်ပါဘူး စေ့စပ်လက်စွပ်ကြောင်းလှပသောစိန်သုံးခုနှင့်အတူထိပ်ဆုံး သူမ၏တော်ဝင်ခင်ပွန်း သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, သူ၏တန်ဖိုး 297 000 ယူရိုမှာခန့်မှန်းထားသည်။
သူမ၏နှစ်ပေါင်းစုံဝတ်စုံများသည်သူမပိုင်ဆိုင်သောဂျော့ခ်ျတွင်တာဝန်ရှိသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုစီအတွက် 41 000 ယူရိုပေးပြီးသူမကနှစ်သိမ့်မှုအပြည့်ရှိသောနှစ်စဉ်လစာ 370 000 ယူရို ... ဖြည့်စွက်သည်အမှတ်တံဆိပ်အမျိုးမျိုးမှရရှိနိုင်သောဇိမ်ခံလက်ဆောင်များစွာကိုသင်ပေါင်းထည့်ပါ။ Meghan Markle သော pitied ခံရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, သူမသည်သူမ၏အကောင့်တွင် 810 000 €ကိုစောင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ သူမခင်ပွန်းဟောင်းနှင့်အတူရောင်းခဲ့သောလော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်အိမ်ခြံမြေ၏တစ်ဝက်မှာယူရိုငွေသန်း XN ဖြင့်ဖြစ်သည်။
ဆိုက်ဘာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများသည် Etienne Eto'o အမည်ကိုဖေ့စ်ဘွတ်တွင်အသုံးပြုပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမိန်းကလေးများထံတောင်းဆိုကြသည်။
Meghan Markle နှင့် Harry တို့၏ခိုးယူထားသောပုံတူ - သို့သော် Duchess ၏ပန်းချီကားကိုသူခိုးကနှင်ထုတ်ခဲ့သည်